IGAD oo taageertay dib ugu noqoshada wada hadalada | KEYDMEDIA ONLINE
IGAD oo taageertay dib ugu noqoshada wada hadalada
Urur Goboleedka IGAD oo taageertay dib ugu noqoshada wada hadalada saamileyda siyaasadda Soomaaliya ee mar kale oo la soo jeediyay in dib loo furo.
D.JIBOUTI, Djibouti - Urur Goboleedka IGAD waxay soo dhaweynaysaa hindisaha la soo jeediyay ee ah in dib loo furo wadahadalladii daneeyayaasha Soomaalida. "Wadahadalku waa geedi socod muhiim ah oo bixiya boos kalsooni leh iyo dhisida kalsoonida" ayaa lagu yiri qoraalka.
IGAD waxay ku boorinaysaa dhamaan daneeyayaasha inay fursad siiyaan hindisaha cusub, ayna dib ugu laabtaan wadahadal wax ku ool ah oo danta ugu weyn dadka Soomaaliyeed iyo in la furo furfurnaanta siyaasadda.
Urur Goboleedka IGAD waxay ku celcelinaysaa in wadahadalku uu weli yahay midka ugu fiican ee wadajirka qaran, loo dhan yahay siyaasadda, dhismaha nabadda, dib-u-heshiisiinta, amniga aadanaha iyo xasilloonida.
IGAD waxay si xooggan ugu boorineysaa dhammaan hogaamiyeyaasha Soomaalida inay is xakameeyaan oo ka fogaadaan ficil kasta oo sii kordhinaya xiisadaha, ama horseedi kara iska hor imaad; iyadoo tan laga hadlayo, waxay ugu baaqeysaa dhammaan daneeyayaasha inay mudnaanta siiyaan wadahadalka himiladooda siyaasadeed.
Ugu dambeyntii Urur Goboleedka IGAD oo qaddarineysaa doorka muhiimka ah ee ka qeybgalka dhinacyada badan ee kobcinta wadajirka siyaasadeed iyo dib uheshiisiinta, waxay diyaar u tahay in laga faa'iideysto si ay u taageeraan hindisaha Midowga Afrika. IGAD ayaa sii wadi doonta taageeridda dadka Soomaaliyeed ee raadinaya nabadda, dimuqraadiyadda iyo xasilloonida.
Halkan hoose ka akhriso Warsaxaafadeedka degdegga ah ee ay IGAD soo saartay: